Anyị na-emepụta silica ájá sitere na silica dị ọcha. Na 99.98% ịdị ọcha, aja silica anyị a na-etinye ọkụ, ịdị ọcha, UV na-eguzogide ọgwụ, na ịchachacha. Ọ dị na a dịgasị iche iche nke ọkọlọtọ urughuru nha na nwekwara ike ahaziri gị nkọwa.
Kemịkalụ pụtara ìhè n'ihe gbasara adịghị ọcha - na - ebute ike ọkụ dị oke mma
Dị na a dịgasị iche iche nke ọkọlọtọ urughuru nha na nwekwara ike ahaziri gị nkọwa
Dinglong na-arụpụta ọtụtụ ngwaahịa silica na-arụpụta na akara ule ngwaahịa akọwapụtara nke ọma, gụnyere ọkwa ngwa ahịa na-adịghị mma, klaasị elektrọnik, ọkwa ọkwa. A na-emepụta ngwaahịa silica niile a na-emepụta n'okpuru ọnọdụ a na-ejikwa nlezianya na-edozi ya ma na-ahazi ya maka ịdị n'otu na ntụkwasị obi iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ike ịdị ọcha na ogo ogo ziri ezi.
Jiri ya ma tụkwasịrị obi gafee ụlọ ọrụ
Dinglong fused silica sands bụ engineered grains mere maka ojiji na foundry, refractory, itinye ego mgbatị, ngwá electronic na ndị ọzọ pụrụ iche ngwa. A na-eji mkpụrụ osisi silica dị ọcha mee mkpụrụ ọka silica a jikọtara ọnụ, na-eji teknụzụ njikọta eletrik iji hụ na ọ kachasị mma. Mkpụrụ ọka silica anyị a na-ejighị n'aka, nwere nkwụsi ike kemịkal mara mma ma nwee oke ikuku eletriki.
Dinglong fused silica sands dị na a dịgasị iche iche nke ọkọlọtọ urughuru nha na nwekwara ike ahaziri gị nkọwa. Ebe ọ bụ na ndị ahịa dị iche iche chọrọ ihe dị iche iche gbasara mkpa ha, anyị na-agba ajụjụ maka nkọwa ọka pụrụ iche. Dinglong fused silica sands dị na 2,200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụpụta mkpụrụ ọka silica a na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gbaara na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Akụrụngwa Silica Mkpụrụ Refractory
Osote: Silica Fused